Mpanamboatra sy mpamatsy bibikely biolojika famokarana bibikely any China | Senton
Bibikely famonoana bibikely ao an-trano Meperfluthrin
Anaran'ny vokatra： Meperfluthrin
Anaran'ny vokatra Meperfluthrin
vokatra 500 taonina / taona
Fitaovam-pitaterana Ranomasina, Rivotra ， Tany
Fanamarinana ICAMA, GMP
Kaody HS 2933199012
Meperfluthrin dia mavitrika Famonoana bibikelymanohitra ny pneaux domesticica sy pipiens. Izany diaa mahomby be -na inhalation ary manisy bibikely karazana bibikely amin'ny sidina moka miaraka amina fianjerana tsara nefa poizina kely. Matetika ampiana ho a zavatra moka miasa, saingy misy fahasimbana kely amin'ny ny vatan'olombelona.
Bika Aman 'endrika: Mavo maivana ka hatramin'ny ranoka volontsôkôlà afaka amin'ny raharaha ivelany.Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny moka Famonoan-tena, Famonoan-tena ho an'ny olon-dehibe,Synergist sy ny sisa.
Hebei Senton dia orinasa mpivarotra varotra iraisam-pirenena matihanina any Shijiazhuang .Raha miasa an'ity vokatra ity izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny fotsy Azamethiphos vovoka, Bibikely mamoa famonoana bibikely matanjaka, Famonoana bibikely haingana Cypermethrin SY sns .Raha mila ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy famonoana bibikely mahomby be? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Meperfluthrin tsara kalitao rehetra ho an'ny moka repeller dia azo antoka kalitao. Izahay dia China Factory Factory an'ny bibikely famonoana bibikely avo lenta. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Vokatry ny famonoana bibikely an'i Dimefluthrin
Ethofenprox bibikely famonoana bibikely
Transfluthrin avo lenta sy lafo vidy
Fitaovana famonoana bibikely ara-toekarena Piperonyl Butoxide
Holatra Microsporidium miavaka Nosema Locustae